ဇနီးဖြစ်သူသေဆုံးသွားပြီးနောက် နာကျင်ခံစားရလွန်းလို့ ကွန်တိန်နာအတွင်းမှာသာနေထိုင်ခဲ့တဲ့ ဖိနပ်ချုပ်သမားအဘိုးအို - Mckzone Daily
မလေးရှားနိုင်ငံ Ipoh မြို့မှာနေထိုင်လျက်ရှိတဲ့ Uncle Osman အမည်ရှိတဲ့ အဘိုးအိုတစ်ဦးဟာ ဇနီးဖြစ်သူသေဆုံးသွားပြီးတဲ့နောက် ဘဝတစ်ခုလုံးပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ရပါတယ် ။ ဇနီးဖြစ်သူ သေဆုံးပြီးနောက် ပိုင်ဆိုင်ထားသမျှအရာအားလုံးကိုရောင်းချပစ်ခဲ့ပြီး ၊ အခုချိန်မှာတော့ ဖိနပ်တွေပြန်ပြင်ပေးနေတဲ့ အသေးစားကွန်တိန်နာတဲလေးမှာ နေထိုင်နေလျက်ရှိကြောင်း Aus Meshi အမည်ရှိတဲ့အမျိုးသားက Twitter စာမျက်နှာပေါ်မှာ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ် ။ ‘ ကျွန်တော့်မိန်းမဆုံးသွားတော့ ကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာတွေအားလုံး ရောင်ချပစ်ခဲ့ပြီး ၊ ဒီဆိုင်လေးထဲမှာပဲ အိပ်တယ် ၊ ကျွန်တော့်မှာ သားသမီးလည်း မရှိပါဘူး ‘ ဆိုပြီး Uncle Osman ကပြောပြခဲ့ပါတယ် ။
Aus Meshi ငယ်ရွယ်စဉ်ကလေးဘဝအချိန်ကတည်းက Uncle Osman က ဖိနပ်ချုပ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကိုင်နေခဲ့တာပါ ။ Uncle Osman က သူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးရောင်းချပြီးနောက်မှာတော့ ၊ လူအတော်များများက Uncle Osman ရဲ့တဲအိမ်လေးကို ကွန်တိန်နာအဖြစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးခဲ့ကြပါတယ် ။
‘ သူ့ဇနီးဆုံးသွားတော့ လူအတော်အများက သူအတွက်ကွန်တိန်နာအိမ်လေးဆောက်လို့ရအောင် လာရောက်လှူတန်းပေးခဲ့ကြတယ် ၊ အဲ့တော့မှ သူပိုပြီး သက်သောင့်သက်သာဖြစ်ခဲ့ရတာပါ ‘ ဆိုပြီး Aus Meshi ကပြောပြခဲ့ပါတယ် ။ ဖိနပ်ချုပ်သမား Uncle Osman က ဘယ်မှာ ရေချိုးပြီး သန့်စင်ခန်းကို ဘယ်နားသွားလဲဆိုပြီး လူအများကမေးမြန်းခဲ့ချိန်မှာတော့ ‘ အဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နားမှ စတိုးဆိုင်တစ်ဆိုင်ရှိတယ် ၊ ဆိုင်ရှင်က Uncle. Osman ကို နေရာလွတ်တစ်ခုပေးပြီး အဲ့မှာပဲ ရေချိုးပြီး အိပ်ခိုင်းစေတယ် ‘ ဆိုပြီး Aus Meshi က ရှင်းပြခဲ့ပါတယ် ။ အခုလို လူတစ်ဦးအပေါ်တစ်ဦးစာနာစိတ်အပြည့်နဲ့ ဂရုစိုက်စောင့်ရှောက်ပေးတဲ့လုပ်ရပ်ဟာ အတော်လေးမွန်မြတ်တယ်လို့ ပြောရမှာပါပဲ ။
မလေးရှားနိုငျငံ Ipoh မွို့မှာနထေိုငျလကျြရှိတဲ့ Uncle Osman အမညျရှိတဲ့ အဘိုးအိုတဈဦးဟာ ဇနီးဖွဈသူသဆေုံးသှားပွီးတဲ့နောကျ ဘဝတဈခုလုံးပွငျးပွငျးထနျထနျပွောငျးလဲသှားခဲ့ရပါတယျ ။ ဇနီးဖွဈသူ သဆေုံးပွီးနောကျ ပိုငျဆိုငျထားသမြှအရာအားလုံးကိုရောငျးခပြဈခဲ့ပွီး ၊ အခုခြိနျမှာတော့ ဖိနပျတှပွေနျပွငျပေးနတေဲ့ အသေးစားကှနျတိနျနာတဲလေးမှာ နထေိုငျနလေကျြရှိကွောငျး Aus Meshi အမညျရှိတဲ့အမြိုးသားက Twitter စာမကျြနှာပျေါမှာ ဖျောပွခဲ့ပါတယျ ။ ‘ ကြှနျတေျာ့မိနျးမဆုံးသှားတော့ ကြှနျတျောပိုငျဆိုငျတဲ့အရာတှအေားလုံး ရောငျခပြဈခဲ့ပွီး ၊ ဒီဆိုငျလေးထဲမှာပဲ အိပျတယျ ၊ ကြှနျတေျာ့မှာ သားသမီးလညျး မရှိပါဘူး ‘ ဆိုပွီး Uncle Osman ကပွောပွခဲ့ပါတယျ ။
Aus Meshi ငယျရှယျစဉျကလေးဘဝအခြိနျကတညျးက Uncle Osman က ဖိနပျခြုပျတဲ့အလုပျကိုလုပျကိုငျနခေဲ့တာပါ ။ Uncle Osman က သူ့ရဲ့ပိုငျဆိုငျမှုတှအေားလုံးရောငျးခပြွီးနောကျမှာတော့ ၊ လူအတျောမြားမြားက Uncle Osman ရဲ့တဲအိမျလေးကို ကှနျတိနျနာအဖွဈပွုပွငျပွောငျးလဲပေးခဲ့ကွပါတယျ ။
‘ သူ့ဇနီးဆုံးသှားတော့ လူအတျောအမြားက သူအတှကျကှနျတိနျနာအိမျလေးဆောကျလို့ရအောငျ လာရောကျလှူတနျးပေးခဲ့ကွတယျ ၊ အဲ့တော့မှ သူပိုပွီး သကျသောငျ့သကျသာဖွဈခဲ့ရတာပါ ‘ ဆိုပွီး Aus Meshi ကပွောပွခဲ့ပါတယျ ။ ဖိနပျခြုပျသမား Uncle Osman က ဘယျမှာ ရခြေိုးပွီး သနျ့စငျခနျးကို ဘယျနားသှားလဲဆိုပွီး လူအမြားကမေးမွနျးခဲ့ခြိနျမှာတော့ ‘ အဲ့ပတျဝနျးကငျြနားမှ စတိုးဆိုငျတဈဆိုငျရှိတယျ ၊ ဆိုငျရှငျက Uncle. Osman ကို နရောလှတျတဈခုပေးပွီး အဲ့မှာပဲ ရခြေိုးပွီး အိပျခိုငျးစတေယျ ‘ ဆိုပွီး Aus Meshi က ရှငျးပွခဲ့ပါတယျ ။ အခုလို လူတဈဦးအပျေါတဈဦးစာနာစိတျအပွညျ့နဲ့ ဂရုစိုကျစောငျ့ရှောကျပေးတဲ့လုပျရပျဟာ အတျောလေးမှနျမွတျတယျလို့ ပွောရမှာပါပဲ ။
Be the first to comment on "ဇနီးဖြစ်သူသေဆုံးသွားပြီးနောက် နာကျင်ခံစားရလွန်းလို့ ကွန်တိန်နာအတွင်းမှာသာနေထိုင်ခဲ့တဲ့ ဖိနပ်ချုပ်သမားအဘိုးအို"